Avid Link App အသုံးပြုသူများ | လေးပုံတစ်ပုံရှိဂီတဖြန့်ဝေခြင်းကို Avid ယူဆောင်လာသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » avid တစ်ရပ်ကွက်သန်း avid Link ကို App ကိုအသုံးပြုသူများမှဂီတဖြန့်ဖြူးပို့ဆောင်
လွန်စွာလိုလားသော Connect ကိုတိုက်ရိုက်, Nashville, Tenn, ဇူလိုင်လ 18, 2019 ။ - At avid Connect ကိုတိုက်ရိုက် Nashville နွေရာသီ NAMM 2019 မှာ, လွန်စွာလိုလားသော® (Nasdaq: avid) AvidPlay ၎င်း၏အသစ်တစ်ခုဂီတဖြန့်ဖြူးဝန်ဆောင်မှုမိတ်ဆက် avid Link ကို အလွယ်တကူပြီးစျေးနှုန်းသက်သာတဲ့သူတို့ရဲ့ဂီတကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံး streaming များဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်ကိုကြားရမှအနုပညာရှင်များ, ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဂီတတံဆိပ်များဖွထို app ။
အနုပညာရှင် Spotify, ပန်ဒိုရာအပါအဝင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အ streaming ဝန်ဆောင်မှုများ, ရာပေါင်းများစွာ၎င်းတို့၏သီချင်းများနှင့်အယ်လ်ဘမ်များဖြန့်ဝေနိုင်ပါတယ် AvidPlay နှင့်တကွ, Google, Amazon က, Music, Netease, ဂါနာ, Anghami, Deezer, iHeartRadio နှင့်များစွာသောပိုပြီးဂီတ Play, နှင့်၏ 100 ရာခိုင်နှုန်းကိုစောင့်ရှောက် အခွင့်အရေးနှင့်ဝင်ငွေများ။ ဂီတဖန်တီးသူရိုးရှင်းစွာအပေါ်သူတို့ရဲ့ဂီတဖြန့်ဖြူးမည့်အစီအစဉ်ဝယ်ယူရန် လွန်စွာလိုလားသော ထို့နောက် Link ကို Marketplace နှင့်အလိုလိုသူတို့ရဲ့ပြီးစီးခဲ့ပုဒ်နှင့်အနုပညာလက်ရာ upload ။ အဆိုတော်များပြီးတော့အလွယ်တကူထုတ်လွှင့်ခံရသည့်ပုဒ်နှင့်အယ်လ်ဘမ်များကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ AvidPlay ဒိုင်ခွက်ကိုသုံးပါ, သူတို့ကအတွင်းကနေသီချင်းတိုင်း-အားလုံးထံမှရရှိခဲ့ပြီးင့်ငွေဘယ်လောက်တွေ့နိုင်ပါသည် လွန်စွာလိုလားသော ဖန်တီးမှု tools များပါသို့မဟုတ်အခမဲ့ထံမှ လွန်စွာလိုလားသော မိုဘိုင်း device များအတွက် Link ကို app ကို။
"ဖန်တီးသူသူတို့၏အကျင့်ကိုကြားနှင့်လက်ျာကကြည့်ရှုအားပေးရဘို့လမ်းကိုပေးကမ္ဘာတဝှမ်းဂီတ, အသံနှင့်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်သူများ၏အောင်မြင်မှုကိုမှအရေးပါဖြစ်ပါတယ်" ဟုရော့က D'Amico, ဒါရိုက်တာ, အော်ဒီယိုနှင့်ဗီဒီယိုအပိုင်းမှာကပြောပါတယ် လွန်စွာလိုလားသော။ "လွန်စွာလိုလားသော Link ကိုအခြားအကြောင်းအရာကိုဖန်တီးသူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးသူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ရက်များတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အတူအနုပညာရှင်များကသူတို့ရဲ့အကျင့်ကိုကျင့်မြှင့်တင်ရန်နှင့်ရပ်ရွာ Lounge အတွင်းထိတွေ့မှုရရှိနိုင်စွမ်းပေးပါသည်။ နှင့် လွန်စွာလိုလားသော လူတိုင်းအတွက်မယ့်မှမရရှိနိုင်ပါ Link ကို လွန်စွာလိုလားသော ဖောက်သည်-ဂီတဖန်တီးသူယခုအလွယ်တကူသူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုချဲ့ထွင်ရန်နိုင်စွမ်းရှိ၎င်းတို့၏ဂီတဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်, အရေးအကြီးဆုံးကတော့သူတို့ထုတ်လုပ်ရန်တွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများကိုပေးဆောင်ရ။ "
လွန်စွာလိုလားသော Link ကို 2019.7 အခမဲ့ Mac အတွက် app ကို Windows, iOS, Android နှင့်အမျှယခုရရှိနိုင်ပါသည်, အတွင်းကနေလက်လှမ်းဖြစ်ပါသည် Pro ကို Tools များ®, မီဒီယာ Composer®နှင့် Sibelius®။ AvidPlay subscriptions ကိုဖွင့် $ 4.99 / တစ်နှစ်မှာ start နှင့်တဆင့်ဝယ်ယူဘို့ရရှိနိုင်ပါသည် လွန်စွာလိုလားသော အတွင်း Marketplace လွန်စွာလိုလားသော Link ကို။
အဆိုပါ လွန်စွာလိုလားသော ဇန်နဝါရီလအတွင်းပွဲထွက်ခဲ့ပြီးနှင့် 260,000 အသုံးပြုသူများသည်ထက်ပိုမိုသည့် Link ကို app ကို, ကိုအခြားအနုပညာရှင်များ, ထုတ်လုပ်သူများ, ရောနှော, တေးရေး, အယ်ဒီတာများ, ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်နှင့် moviemakers ဖြင့်ချိတ်ဆက်သူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုချဲ့ထွင်သူတို့ကွန်ယက်ကိုကြီးထွားခွင့်များနှင့်အဖိုးတန်ထိတွေ့မှုရရှိအသိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်ဖွ ။ ထိပ်တန်းအနုပညာရှင်များ, ဆုရဂီတပညာရှင်များနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုအသုံးပြုသူများသုံးစွဲနိုင်မှုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အလုပ်အားမျှဝေတုံ့ပြန်ချက်နှင့်အကြံဉာဏ်ကိုရ, သူတို့ကိုအသုံးပြုဖို့ရာဖန်တီးမှု tools တွေနဲ့ကမ္ဘာကြီးကို-နေပါစေဝှမ်းမှတူသောစိတ်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူပူးပေါင်းနိုင်ပါ။
လွန်စွာလိုလားသော'' s ကို Connect ကိုတိုက်ရိုက် Nashville အဖြစ်အပျက်ကဖန်တီးသောဂီတအသိုင်းအဝိုင်းကျင်းပထုတ်လုပ်, ဆောင်ရွက်နှင့်အတူ၎င်း၏ဂီတဖြန့်ဝေ လွန်စွာလိုလားသော ဖန်တီးမှုကိရိယာများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ။ ဒါဟာအကြောင်းအရာများ, အရင်ဖျော်ဖြေစတူဒီယို session ကိုမှတ်တမ်းတင်နည်းစနစ်, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှမှတ်တမ်းတင်နည်းပညာကိုဖုံးအုပ်ထားသင့်ကိုယ်ပိုင်သရုပ်ပြမှတ်တမ်းတင်ခြင်း, ပုံကြမ်းကနေသီချင်းသွားအတူတက်ရောက်အခမဲ့သင်တန်းများပါဝင်သည်။ Breakout panel ကဆွေးနွေးမှုများ Dolby Atmos, ဂီတဖန်တီးမှု, အသံအင်ဂျင်နီယာ, အသံရောစပ်နှင့်တေးဂီတထုတ်လုပ်မှုကိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။
ဂီတအသိုင်းအဝိုင်းတကမ္ဘာလုံးအပေါ်တိုက်ရိုက်စီးမှတဆင့်သည်ဤဖြစ်ရပ်များအတွက် join ဖို့ဖိတ်ခေါ်နေပါတယ် avid Link ကိုအဘယ်မှာကြည့်ရှု Lounge တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နှင့်တူသောစိတ်အနုပညာရှင်တွေတွေ့ဆုံရန်နိုင်ပါတယ်။ လွန်စွာလိုလားသော Link ကိုဖွစျစနေို အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်လုပ်။ အဆိုပါတိုက်ရိုက်စီးလည်းမှာမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည် avid.com နှင့်ပေါ် လွန်စွာလိုလားသော'' s ကိုဆိုရှယ်မီဒီယာမှာကိုင်တွယ် www.youtube.com/avid, www.facebook.com/avid, www.facebook.com/avidprotools, www.twitter.com/avidနှင့် www.twitter.com/avidprotools.
လွန်စွာလိုလားသော အများဆုံးဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ထိရောက်သောမီဒီယာပလက်ဖောင်းပူးပေါင်း, ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ဖြန့်ဖြူးခြင်း, သုံးစွဲမှုနှင့်အတူအကြောင်းအရာဖန်တီးမှုကိုဆက်သွယ်ထားသော, ကယ်တင်တတ်၏။ လွန်စွာလိုလားသော'' s ကိုဉီးဖောက်သည်အသိုင်းအဝိုင်းအသုံးပြုမှု လွန်စွာလိုလားသော'' s ကိုပြည့်စုံကိရိယာများနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်အများဆုံးစောင့်ကြည့်ဖန်တီးဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ငွေရှာခြင်းချစ်နှင့်မီဒီယာစကားကိုနားထောငျထဲမှာကမ္ဘာ့ထံမှဂုဏ်သတင်းနှင့်ဆုရ feature ကိုရုပ်ရှင်လူကြိုက်များရုပ်မြင်သံကြားရှိုးများ, သတင်းအစီအစဉ်များနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအားကစားဖြစ်ရပ်များနှင့်တေးဂီတအသံသွင်းကျင်းပ နှင့်တိုက်ရိုက်ဖျော်ဖြေပွဲ။ အများဆုံးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြန့်ကျက်ခြင်းနှင့်စျေးနှုန်း options များနှင့်အတူ, လွန်စွာလိုလားသော'' s ကိုစက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင်ဖြေရှင်းချက်မီဒီယာ Composer ပါဝင်သည်®, Pro ကို Tools များ®, လွန်စွာလိုလားသော NEXIS®, MediaCentral®, iNEWS®, Airspeed®, Sibelius®, လွန်စွာလိုလားသော ကစားရန်နေရာ™, FastServe®နှင့် Maestro™။ အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက လွန်စွာလိုလားသော ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ, အလည်အပတ်ခရီး www.avid.comအတူ ချိတ်ဆက်. လွန်စွာလိုလားသော on Facebook က, Instagram ကို, တွစ်တာ, YouTube ကို, LinkedIn တို့, ဒါမှမဟုတ်စာရင်းသွင်း avid ဘလော့များ.
© 2019 လွန်စွာလိုလားသော နည်းပညာ, Inc All rights reserved ။ လွန်စွာလိုလားသော, အ လွန်စွာလိုလားသော လိုဂို, လွန်စွာလိုလားသော Link ကို, AvidPlay, လွန်စွာလိုလားသော NEXIS, FastServe, Airspeed, iNews, Maestro, MediaCentral, မီဒီယာ Composer, Pro ကို Tools များ, လွန်စွာလိုလားသော ကစားရန်နေရာနှင့် Sibelius အမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်၏မှတ်ပုံတင်အမှတ်တံဆိပ်များမှာ လွန်စွာလိုလားသော နည်းပညာ, Inc ဒါမှမဟုတ်ယူနိုက်တက်စတိတ်နှင့် / သို့မဟုတ်အခြားနိုင်ငံများ၌၎င်း၏လုပ်ငန်းခွဲများ။ အားလုံးသည်အခြားအမှတ်တံဆိပ်ဟာသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ကြသည်။ ကုန်ပစ္စည်း features တွေ, သတ်မှတ်ချက်များ, စနစ်လိုအပ်ချက်များကိုနှင့်ရရှိနိုင်မှုအသိပေးစာမပါဘဲပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။
လွန်စွာလိုလားသော ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ SJGolden - လှံ & Arrows တီဗီနည်းပညာ TVU ကွန်ယက် 2019-07-18
ယခင်: KRK စနစ်များစတင်အုတ်မြစ်အသံ Tools များ App ကို
နောက်တစ်ခု: avid တိုးချဲ့အသံထိန်းချုပ်ရေးက Surface Portfolio သေးစီမံခန့်ခွဲရေးစီမံကိန်းစတူဒီယို၏ သာ. ကောင်း၏လိပ်စာလိုအပ်ချက်များမှ